Reuzel - Fiber Pomade 4oz | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Reuzel - Fiber Pomade
Reuzel - Fiber Pomade
--Strong Hold | Natural Finish | Water-Based Fiber Pomade--
ဆံပင်ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ဆံပင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်တော်ပြီး၊ ဆံပင်ကိုတောင့်ခဲသွားစေခြင်းမရှိပဲ၊ အချိန်မရွေးဆံပင်ပုံစံပြန်ပြောင်းနိုင်စေမည့်...
Reuzel - Fiber Pomade သည် Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ထုတ်လုပ်ထားသော အကောင်းဆုံး Strong Hold, သဘာဝဆန်ဆန် ဆံပင်အရောင်တောက်ပြောင်စေမှု Low Shine နှင့် ချောချောမွေ့မွေ့ ပုံသွင်းနိုင်စေမည့် ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
သဘာဝဆံပင်အရောင်တောက်ပမှုဖြင့် ဆံပင်အဖွပုံစံများ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပုံစံမျာအားလုံးသွားနိုင်သောကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသော ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။ အလွန်အမင်းမာတောင့်ခဲသွားခြင်းမရှိသလို၊ အချိန်နေရာမရွေး ဆံပင်ပြန်ပြင်နိုင်ပြီး၊ ခေါင်းလျှော်ရလဲလွယ်ကူပါသည်။ ဘီးကိုအသုံးပြုပြီးလည်း ဆံပင်ကောက်သားကိုပြေစေနိုင်ပါသည်။
Low Shine သဘာဝဆန်ဆန် ဆံပင်အရောင်ပုံမှန်တောက်ပြောင်စေခြင်း
Fiber Pomade creates hours of textured definition withafirm but pliable hold andalow shine finish. It controls even the curliest, thickest, most unruly hair out there to keep hair in place and looking great all day. Fiber Pomade will texturize and increase fullness forastraight out of bed, disheveled look or just run it withacomb foraslick, neat look.